China External Sleeve Cage Chock Valve fekitari uye vagadziri Cepai
Standard Chock mavharuvhu anoenderana neAPI 6A 21th yazvino Edition, uye shandisa izvo zvakanaka zvinhu zveH2S sevhisi zvinoenderana neNACE MR0175 standard.
Chinyorwa Chemhando: AA ~ FF
Mavheji eECPAI's Chock anosanganisira Positive Chock Valve, Adjustable Chock Valve, Sleeve Chock Valve, External Sleeve Cage Chock Valve, aya mavhavha anopiwa neECPAI kune nyika dzakasiyana, uye ese magadzirirwo seAPA6A Chaizvoizvo, uyezve, tinogona kugadzira nekuita yakakosha chock mavharuvhu zvinoenderana zvakasiyana nezvinodiwa. Zvigaro zvavo uye tsono yevhavhavha inogadzirwa neyakaomarara chiwanikwa, iyo inovandudza iyo ngura kuramba, kufashaira kuramba kuita, uye zvinhu zve throttle kamwene yakagadzirwa nekeramiki kana yakaoma alloy, torque yeCage mhando yekukachidza vharafu idiki torque, inogona zvese kugadzirisa uye kudimburwa iyo yemvura nezvimwewo, kudzora kuyerera chiyero nekutsiva iyo throttle kamwene yemhando dzakasiyana.
Chigadzirwa Chigadzirwa Chikamu: PSL1 ~ 4 Chinyorwa Kirasi: AA ~ FF Performance Kudikanwa: PR1-PR2 Yekupisa Kirasi: LU
◆ Kukanganisa kudiki uye ruzha rwemvura
◆ Muviri / bhoneti zvigadzirwa zvinosanganisira kabhoni simbi, alloy simbi, simbi isina simbi uye duplex simbi isina simbi
◆ In-mutsetse kana angled muviri sarudzo
◆ Mavharuvhu zvinogona zvoga pamwe yemagetsi kana pneumatic actuators
◆ Simbi kusimbi yakavharwa zvinoenderana neANSI kirasi VI & V
Zita Chock Valve
Muenzaniso Positive Chock Valve / Adjustable Chock Valve / Needle Chock Valve / External Sleeve Cage Chock Valve
Dzvinyiriro 2000PSI ～ 15000PSI
Dhayamita 2-1 / 16 "" 7-1 / 16 "(46mm ～ 230mm)
• Munda wekushandura makiti kubva pane zvakanaka kuenda kuchadziri kungadzipwa uye zvinopesana.
• Bonnet nzungu ine vent buri yekuchengetedza panguva yekusevha.
Muviri / bhoneti zvigadzirwa zvinosanganisira, kabhoni simbi, alloy simbi, simbi isina simbi uye duplex simbi isina simbi kuti ienderane nekushandisa kwakasiyana.
Kuwedzera pakati pehupamhi hwehukuru hwebhinzi hwe 0.4 mm (1/64 mukati) kusvika 50.8 mm (128/64 mu).
Zvinhu zvakasiyana zvekuvakwa kweBeans
• Isimbi isina kuchena • Yakatenderedzwa neStudio • Yakagadzirwa neCeramic. Tungsten carbide yakarongedzwa
Kwekutanga kuvaka bhinzi kweFixed Bean Choke
Kusimudza Gasi kudzipwa
Gasi rinosimudza kuyerera ekudzora mavharuvhu ari kuitwa ese ari mu-mutsara uye angled muviri kumisikidza ne flange, yakasungwa kana weld magumo ekubatana.
Iine huwandu hwesimbi yetrim uye zvishandiso, aya mavhavha anoshandisa purogi yakadhinda ichienda muchigaro kuti isiyane chaiyo kuyerera renji nekudaro ichipa yakanaka kuyerera kudzora.
JVS mavhavhari ekudzora ave vharuvhu yesarudzo mune akawanda magasi anosimudza kuisa.
Plug & Yaiba Chock vharafu
Iyo plug uye cage trim inoshandisa yakasimba plug ine pikicha yekuyera maburi inofamba mukati meiyo inotakurika cage kudzora kuyerera. Iyi dhizaini inopa yakanyanya kuyerera kugona kweye cage trim choke vharuvhu. Munzvimbo yakavharwa, ipulagi inodzika pasi ichivhara madoko mune inoyerera keji uye inosangana neringi yechigaro kuti ipe yakanaka kuvharwa. Kuyerera kunotungamirwa muchikamu chemuhombekombe kuburikidza nezviteshi uye zvinopinda mukati mekamuri yekuyerera.
Yekunze sleeve mhando trim inoshandisa yekuyerera sleeve inofamba pamusoro pekunze kwechiteshi keji kudzora kuyerera. Simbi kune simbi (zvingasarudzika tungsten carbide) chigaro dhizaina kunze kwekuyerera sleeve uye kunze kweiyo yepamusoro velocity kuyerera inovimbisa yakanaka kuvharwa uye hwakareba chigaro hupenyu. Iyo inodzora element (inoyerera sleeve) inofamba mune yakaderera velocity hutongi uye inotungamira kune yakakwira kukwirisa kusagadzikana kweiyi trim dhizaini. Kunyorera kweichi choko kunosanganisira yakakwira-yekumanikidza madonhwe uye mvura ine zvakadzika zvemukati senge yekugadzira jecha. Iyi trim inowanzo kupihwa mu tungsten carbide
Pashure: DUAL Plate TARIRA VHIVHA
Zvadaro: Kuwedzera Kupfuura neKodhijeti Gedhi Valve yeAPA6A Standard